MAREEGTA ARRIMAHA CAAFIMAADKA » Cilmi-baadhid Ku Saabsan Riixada Qadhmuun Ee Afka Dadka Ka Soo Baxada *Af Qadhmuun-ka*
Cilmi-baadhid Ku Saabsan Riixada Qadhmuun Ee Afka Dadka Ka Soo Baxada *Af Qadhmuun-ka*
Af-qadhmuun-ka waxa afka qalaad lagu yidhaahdaa ”Halitosis” waana xaalad qofka afkiisa uu ka soo baxo nakhas ama hawo uraysaa, taas oo ka duwan af-urka subaxii lala soo tooso ee caadiga ah, kaas oo ku baab’a naadiifinta ilkaha ama cadayga subaxii.
Af-qadhmuunku ma laha wax xuduud ah, umana kala sooco dadka da’dooda, intaa waxa sii dheer in af-qadhmuunku uu ku keeno qofka niyad jab aad u daran taasoo keensanaysa in qofku ka fogaado dadka iyo la hadlakoodaba, xitaa aanu u sheeganin dhibaatadiisa dhakhaatiirta. badanaa niyad jabkani waxa uu ka dhashaa in dadka qaba af-qadhmuunka aanay dareemi karin dhibaatada haysata illaa ay ka ogaadaan dad kale. kadibna ay ka go’aan bulshahda kana doorbidaan kalinnimada.
Maxaa keena Af-qadhmuun-ka?
Waxa loo kala qaadaa sababha keena af-qadhmuunka laba qaybood oo kala ah:
– Infection ama caabuq ku dhaca hanqalaalka sanka iyo afka u dhaxeeyo (Sinusitis) ama qalad ka jira qaab-dhismeedka lafta hanqalaalka oo qofku ku dhashay.
– Sanbabada qofka oo buka (khaas ahaan cudurrada malax-samayska ee sanbabada ”suppurative lung diseases)
– Hawlgabka kilyaha (qashinkii kilyaha jidhka ka saari jiray oo hawo ahaan loo soo saaro sida kaadida ”urea”)
– Hawlgabka beerka (qashinkii beerka jidhka ka saari jiray oo hawo ahaan loo soo saaro)
– Cudur ku dhaca dhiigga
– Xamiitada oo bukoota
– Cillaad dheefshiid-ka ka timaada
– Cunnooyinka qaar
-Isticmaalka Maandooriyaha sida Cunida Qaad-ka iyo Xashiish-ka
Caafimaad darro ka timaada ilkaha
– Ciridka oo buka
– Infection ilkaha ah ama cirid-ka
– Af-qaleelka (daawooyinka iyo cudurrada qaar ayaa keeno af-qaleelka)
– Daawooyinka sanka lagu dhibciyo
– Xasaasiyada cabbudh-ka keento
– Bakteeriyda hawo la’aanta oo ku badata afka ama sanka
90% oo ka mid ah waxyaabaha keena af-qadhmuun-ka waxay ka timaadaa bakteeriyada qudhmiska oo afka ku korto, taasoo ka dhalata cudurrada aan kor ku soo xusnay.
Si loo ogaado waxa keenay af-qadhmuun-ka waa in la helo lana baadho haddii ay jiraan caafimaad darro ka timid xagga ilkaha kadib ayaa loo gudbi karaa waxyaabaha kale ee keeni kara af-qadhmuun-ka.
Sidaa darteed waxaad u baahantahay marka ugu horraysa in aad u tagto dhakhtar ku takhasusay ilkaha.
Ka hortagga af-qadhmuun-ka
Ilaali caafimaadka ilkahaaga, cadayo inta aanad seexan iyo marka aad soo kacdaba.
Hadii aad isku aragto caalamada kale ee la socdo af-qadhmuun-ka la socodsii dhakhtarkaaga.
Af-qadhmuun-ku ceeb ma aha waana cudur la mid ah cudurrada kale, kumana xidhna nadaafad darro ee dhakhtar u tag una sheeg waxa aad dareemeysid.
Calaaasho xanjada si afkaaga qalleelka uga baaba’o una yeesho calyo.
Waxa soo Tarjumay: Osman Abdillahi Sool…..Freelance Journalist. sooldhuub@hotmail.com
· admin	· 34 Comments Posted in: Maqaalo	34 Responses
YUSUF IBRAAHIM - februari 5, 2011
WAAD SALAAMAN TIHIIN DHAMAAN TIIN, WAXAAN U BAAHNAA INAAN HELO MAQAALO KA HADLAAYO CAAFIMAADKA RAGGA GAAR AHAAN KAADI HEYSTA SIDA PROSTATADA ,WAXA KEENA IYO SIDA LOODAAWEEYO IYO WAX YEELADA EEY KEENI KARTO INTA EEY KU HEEYSO , WALOOW AAN QABO SU AALO BADAN , MARKA HORE AAN JAWAAB ISIN KA HELO.
admin - mars 24, 2011
Yusuf! Waanu kaa qaadnay salaantaas. Maqaalo badan ayaanu soo diyaarinaa, kan Prostatada, ee na soo waydiisayna qorshaha ayuu noogu jiraa in aanu soo daabcano inshaanlaa wakhti dhaw ee la soco inshaanlaa
najmo - mars 29, 2011
asc walalal waxaan qabaa af qadhmuun oo waxaan utagay dhaqtar ilka ha wuxuu igu yiri ilka haga waa fiican yihiin wax ma qabaa marka aniga waa uraya neeftayda hada ka hir waxaa layku sheegay sokotayda in ay kacsan tahay markii laygu celiyayana waa layga wayayay marka walala waxay igu tahay dhib in aan la xiriro dhaqtarkale oo luqada wadan ka aa idhibaysaa marka waxaan kaa idinka codsanayaa in aad noo soo qortaan dawooyin free ah si aan ugado ma taloojin .
admin - april 3, 2011
Waan ku salaamayaa Najmo/Bahjo.
Waanad ku mahadsan tahay suáashaas aad na soo waydiisay.
Runtii adigoo kaliya maaha dadka ay dhibtaasu ay hayso, hase yeeshee waxaa jira dad aad u tiro badan oo ka cabanaya urtaas. Haddaba urta ka soo baxda afka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood, mid ka timaada huurada/wasakhda ilkaha iyo mid ka timaada xaga caloosha oo afka soo marta. Haddaba waxaa jirta dhagaxaan ilkaha gala oo afka qalaad loo yaqaano english (tartar) ama iswedhish (tandsten), marka uu dhagaxani ilkaha ku dhasho wuxuu keena ur, waxaa kaloo urta keenta, haddii ciridka iligu uu daloolo ama god ka samayso ciridka waxay keentaa ur. urta ugu waynina waxay ka timaadaa carabka, sababtuna waxay tahay, carabka oo aan la safayn/cadayin muddo maalmo ah. Waxaan talo ahaan kuu soo jeedin lahaa inaad isticmaasho daawada SB12, waa free, waaxaan ka heli kartaa farmasiga. Inta aad isticmaali kartidna waa muddo 14 cisho, laba wiig. Waxaan filayaa inaad ku qanacday suáashii aad na soo waydiisay. Bahda mareegta caafimaaka
ahmad nur ahamad - april 12, 2011
warsame nur - maj 31, 2011
walaalayaal sc waxaan joogaa boosaaso marka hore waxaan leeyahay af qadhmuun aad iyo aad u badan si kasta oo aan u cadaydo hadana waxaad moodaaa in neef qarmuuni ka imanayso gudaha hunguriga caloosha iyo meelahaa walaal garan maayo waxaan sameeyo dhakhtaro badan baan u tagay hadana ilaa imika wuu sii socdaa af qarmuunku waxaa ila soo gudboonaatay xaalad niyad jab ah fadlan talo tusaale iyo daawin wixii igu habooon ii soo sheega takale waxaan websitekan ku arkay hanqalaalka lafta oo qofku ku dhashay maxay tahay hanqalaalku se ma tahay mida aniga igu keenaysa xaaladan sidee se loo baaraa hanqalaalka lafta qofku dhasho hadiiba ay tahay
admin - maj 31, 2011
Asalaamu Calaykum Warsame Nuur!
Marka hore aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay suáashaas aad na soo waydiisay. Suáashan mid la mida ah ayaa waxaa na soo waydiiyey akhriste soo booqday boggan Caafimaadka.com. Sidaa aad u qeexday ayuu u qeexay. Jawaabtii aanu suáashaa ka bixinay ayaan halkan kuugu soo lifaaqayaa. Maadaamood tidhi waxaan joogaa boosaaso waxaa laga yaabbaa dawadan B12 ee ururta biinaysa ama yaraynaysa in aan laga helin. Sida aad maqaalka ”Cilmi-baadhid Ku Saabsan Riixada Qadhmuun Ee Afka Dadka Ka Soo Baxada *Af Qadhmuun-ka” aad ka aragtay waxaa jira cuduro qofka ku dhaca oo keeni kara urta/qadhmuunka afka. Waxaad aad isticmaali kartaa dawada ilkaha lagu cadaydo, carabakana aad u safee oo si fiican u caday. Warasame waan dareemayaa in ay dhibaato kugu hayso urtu, balse ha niyad jabin. Halkani hoose ka akhrsio jawaabtii aanu siinay akhristihii suáashaadaas oo kale na soo waydiiyey.
Waad mahadsan tahay.
Runtii adigoo kaliya maaha dadka ay dhibtaasu ay hayso, hase yeeshee waxaa jira dad aad u tiro badan oo ka cabanaya urtaas. Haddaba urta ka soo baxda afka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood, mid ka timaada huurada/wasakhda ilkaha iyo mid ka timaada xaga caloosha oo afka soo marta. Haddaba waxaa jirta dhagaxaan ilkaha gala oo afka qalaad loo yaqaano english (tartar) , marka uu dhagaxani ilkaha ku dhasho wuxuu keena ur, waxaa kaloo urta keenta, haddii ciridka iligu uu daloolo ama god ka samayso ciridka waxay keentaa ur. urta ugu waynina waxay ka timaadaa carabka, sababtuna waxay tahay, carabka oo aan la safayn/cadayin muddo maalmo ah. Waxaan talo ahaan kuu soo jeedin lahaa inaad isticmaasho daawada SB12, waa free, waaxaan ka heli kartaa farmasiga. Inta aad isticmaali kartidna waa muddo 14 cisho, laba wiig.
Waxaan filayaa inaad ku qanacday suáashii aad na soo waydiisay.
FARXIYA - juni 28, 2011
MAGACAYGU WAA FARXIYO WALAAL WAXAAN QABAA AF QADHMUUN AAD U DARAN WAX WALBANA WAAN SAMEEYAY MARKAA WAXAAN U MALAYNAYAA IN XAGA CALOOSHA AY TAHAY MARKAA WALAAL SIDEE LOO BAADHAA CALOOSHA MARKUU KA IMANAAYO ADOO MAHADSAN WALAAL WIXII TALO AHNA ISII MAHADSANID
faadumo - juli 1, 2011
magacaygu waa faadumo walaal waxaan qabaa af qadhmuun aad u daran oo aan u malaynaayo inuu ka imanaayo caloosha ilaa yaraantaydii baan lahaa fadlan markaa ii soo sheeg sida loo baadho kaa aad moodayso inuu caloosha ka imanayo waxaan joogaa somalia
admin - juli 3, 2011
Walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay suáashaa (Af qadhmuun) aad na soo waydiisay, runtii waa suáal dad aad u badani ay na soo waydiiyeen. Urta ugu weyni marka hore waxa ay ka timaadaa afka, waxaana keenta urta , bakteriyo. Urtii ka imanaysay caloosha waxa ay soo maraysaa, oo ka soo baxaysaa sambabada. Culimada baadhista caafimadka waxa ay isu raaceen in urta ugu badani ay ka timaado afka, Waxaa jira bakteriya ku ururta oo marka danbe keenta ur, waxa ay ku ururaan xoqadaha dabadooda. Taasina qofku wuxuu moodaa in ay urtaasi ka timid caloosha. Waxa inta badan la isku raacsan yahay inurtu ka timaado afka sababo awgood. Sida su´aashaada ku qoran waxaad tidhi urtani waxay i haysay ilaa yaraantaadii, (urta aan joogsanin oo afka qalaad lagu yidhaadho (chronic halitosis). Waxaa jira cuduro keena urta ka timaada afka, waxaa kaloo jira dawooyin la isticmaalo oo keena urta. Haddii uu qofku cuno cunto xawaash badan leh ayey cilmi baadhayaashu yidhaahdaan waxay keentaa ur. Haddaba Faadumooy waa la baadhi karaa urta xoqadaha ka imanaysa ee ta caloosha way dhib badan tahay. Waayo caloosha waxaa ku jiraa intaas oo xubnood oo mid walba shaqo gaar uu qabto, haddii la yidhdho ha la ogaado ta ay ka imanayso urtu way adag tahay. Qofka ay dhibtani hayso waxa ay saamayn ku yeelaataa nolosha qofka. Habka baadhista urta xoqadaha u malayn maayo in Somaaliya laga helaayo.
Walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay suáashaa (Af qadhmuun) aad na soo waydiisay, runtii waa suáal dad aad u badani ay na soo waydiiyeen. Urta ugu weyni marka hore waxa ay ka timaadaa afka, waxaana keenta urta , bakteriyo. Urtii ka imanaysay caloosha waxa ay soo maraysaa, oo ka soo baxaysaa sambabada. Culimada baadhista caafimadka waxa ay isu raaceen in urta ugu badani ay ka timaado afka, Waxaa jira bakteriya ku ururta oo marka danbe keenta ur, waxa ay ku ururaan xoqadaha dabadooda. Taasina qofku wuxuu moodaa in ay urtaasi ka timid caloosha. Waxa inta badan la isku raacsan yahay inurtu ka timaado afka sababo awgood. Sida su´aashaada ku qoran waxaad tidhi urtani waxay i haysay ilaa yaraantaadii, (urta aan joogsanin oo afka qalaad lagu yidhaadho (chronic halitosis). Waxaa jira cuduro keena urta ka timaada afka, waxaa kaloo jira dawooyin la isticmaalo oo keena urta. Haddii uu qofku cuno cunto xawaash badan leh ayey cilmi baadhayaashu yidhaahdaan waxay keentaa ur. Haddaba Farxiyo waa la baadhi karaa urta xoqadaha ka imanaysa ee ta caloosha way dhib badan tahay. Waayo caloosha waxaa ku jiraa intaas oo xubnood oo mid walba shaqo gaar uu qabto, haddii la yidhdho ha la ogaado ta ay ka imanayso urtu way adag tahay. Qofka ay dhibtani hayso waxa ay saamayn ku yeelaataa nolosha qofka.
waxaan filayaa in aad ku qanacday suáashaas jawaabteedii
ROODA - juli 17, 2011
walaal marka hore waan idin salaamay, salaan ka dib walaal waxaan qabaa cudurkaa af qadhmuunka in badana wuu i haystay dhibaato badana waan ka soo maray dhakhtarkana waan la xidhiidhay wuxuu ii diray dhakhtarka ilkaha isna waxa uu ii qoray dawo lagu luqluqdo oo waxa uu ii sheegay inay ciridka tahay ciladu masa aha oo xataa hadaan dawadii dhamaystay oo ciridkiina fiicnaaday wali way jirtaa neeftayda baa uraysa , waliba waxad mooda inay sii badanayso, walaal ma garanayo waxan sameeyo waxani mudo badan bay i haysay ,waxa dhacday xataa inaan cuqdad qaaday oon ka go’ay inaan dadka la sheekaysto ama ag fadhiisto anoo ka baqaya inay sanka iga qabsadan, waxan ahay gabadh wax baratay ,hasa ahaatee ma shaqaysto oo dadkii xataa lama shaqayn karo waxa dhacday in xataa dhow shaqo la iga eryay sababtuna tahay dadka aan la shaqeeyo oo ka cawday in aanay ila shaqayn karayn, lakiin la iigu mar-marsiiyooday wax yaabo kale aniguse aan ogahay cilada, iminka waxay noloshaydii ku soo ururtay inaan guriga isku qariyo oon qof walba ka fogaado, dhibaatada haysata dadka qaba cudurka urta afka waxa haysta dhib aan cidi qiyasi karin, wax kale iska daayoo xataa qofka aad nolosha la wadaagto kuma dul qadan karo iska daa cid kalena , anigu waxan haysta caruur yar-yar aabohoodna waxa uu iga tegay riixda qadhmuun ee afkayga ka soo baxaysa, isagoo waliba markuu ila joogayna igu hayay aflagaado aad u xun oo naftayda dhaawac wayn ku reebtay ,sidas ay tahay hadana wali ilaahay kamaan rajo dhigin ,waxaan ilahay ka sugayaa inaan maalin uun ilahay ka heli doono naxariis aniga iyo inta ila mid ahba , waxaana u sheegayaa dhamaan dhibanayaasha inaan noqono (strong) waa inaan adkaysi u yeelana wax kasta oo naga soo gaadha dadka kale ee iyagu noola dhaqmaya inaan anagu cudurka soo iibsanay, iga raali ahaada hadaan hadalka badiyay, waxaan uga jeeda inaan si daacad ah ula wadaago murugada ay qaban dadka ila midka ah,
adna walaal waxaan kaa codsanayaa inaad ii soo gud biso wixii talo ah ama waxad is leedahay waan kaga bogsan karaa xanuunkan . aadna walaal waad u mahadsan tahay
admin - juli 21, 2011
Walaal waanu kaa qaadnay salaantaa qiimaha iyo qaayaha leh ee aad noo soo dirtay. Walaal waxa aanu aad iyo aad kaaga mahad celinaynaa sida geesinimada leh ee aad u soo bandhigtay dareenkaaga. Walaal waa qiso cashar wanaagsan oo dawo ah u noqonaysa dad aad u badan oo dhibtani ay haysato. Waxa kale oo ay cashar u tahay dadka kale ee aan dhibtani haysanin, in ay dareemaan dhibta intaa leéeg ee la soo derista qofka ay dhibtani haysato. Su ´aal mar hore nalaga soo waydiiyey amuurtan, ayaan ku sheegay in urta ka soo baxda afka (afka qadhmuun) ay saamayn ku yeelato qofka noloshiisa. Walaal xanuunka iyo dhibta Ilaahay baa keena , Ilaahay baana qofka ka dul qaad. Ha ka quusan rajada Ilaahay. Waxaa laga yaabaa in sabarkaa iyo dulqaadkaa, Ilaahay wax faraj ah kuugu bedelo. Ilaahayna waxa aanu kaaga baryeynaa adiga, inta
maanta xanuun u jiifta, ama xanuun hayo, in uu Ilaahay SW ka dul qaado Amiin Amiin. Waxa aanu kaaga balan qaadaynaa wixii tallo ama dawo aad ku fiicnaato in aanu kuu soo gudbino inshaanlaa.
caadil - november 12, 2011
asc waa caadil oo jooga nairobi waxan qabaa af qormoon aad iyo aad udaran waxane utagay dakhtar badan ilaa hadane wax caafimaad ah ma helin marka walal waano ama talo maxaad isiin dhibaato xoogbadan ayaane iga haysato arinkaas jwb
caadil - november 13, 2011
asc walal waanka xumahay waxan lasoo bixi waa yay meeshii aan ka akhrisan lahaay waxaad ii soo qorteen marka wixi jwbka ah ciwaankaas ii gu soo dir mahadsanid dhibkeyguna waxa weeye waxan qabaa af qurmoon aad iyo aad udaran daawane waanka daalay iyo dhaqaatiir marka wixi latalin ah fadlan ciwaankaas iigu soo dir thanks brother
jaamac - november 15, 2011
asc dhamaantiin magacaygu waa jaamac waxaan joogaa hergeisa hada 2 weeks ayaan waxaan la soo darsay xaaladan afqadhmuunimada aniga oo markii hore ahaa dadka aadka afkoodu u udgoonyahay waxaan ahaa qof caadiya kumana dhalan waxan markii aan yaabay ayaan dhakhtar u tagay waxa layga helay in ay caloosha cayayaan igaga noolyihiin ku waas oo la ii sheegay in ay ku dhimanayaan mudo 7 days ah markii dawooyin lay soo qoray ilaahada waxaan wadaa dawadii 7 days kiina may dhamaan bal waxaan eegi doonaa in ciladaas caloosha ee cayayaanku keentay urtan oo ay iga baaba’do hase ahaatee waxaan idin waydiiyay daawadan SB12 hargaysa miyaan ka heli karaa se ma daawaynaysaa afqadhmuunka hadaanuu qofku ku dhalan
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Caadil: Waxaad tidhi waxaan qabaa af qarmuun. waanan ka daalay dawooyin iyo dhakhaatiir. Bal haddaba waxa aad isku daydaa in aad cunto calaaliso, kamsarada. waxa ay ka mid tahay waxyaalah baaiiya urta faka qadhmuun.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay: dawadan SB12 waxaa laga yabaa in ay hayaan farmasiiydan cusub ee daawooyinka ilkaha iibiya. Mid wuxuu ku ag yaalaa fooqa Bis dhinaca basasku ka baxaan, waxa kaloo farmasigan ay isku dhaw yihiin, sawirlaha caanka ah ee Victoria ….. ee halkaa waydii in ay hayaan iyo in kale. Fooqa Jirde Xuseen, meeshii baaniyaladii hore waxaa ku yaala sida aan ku arkay farmasi iyo dhakhtarka xaga ilkaha ee bal kuwaana waydii. salamu calaykum
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay: dawadan SB12 waxaa laga yabaa in ay hayaan farmasiiydan cusub ee daawooyinka ilkaha iibiya. Mid wuxuu ku ag yaalaa fooqa Bis dhinaca basasku ka baxaan, waxa kaloo farmasigan ay isku dhaw yihiin, sawirlaha caanka ah ee Victoria ….. ee halkaa waydii in ay hayaan iyo in kale. Fooqa Jirde Xuseen, meeshii baaniyaladii hore waxaa ku yaala sida aan ku arkay farmasi iyo dhakhtarka xaga ilkaha ee bal kuwaana waydii.
caadil - december 10, 2011
asc walal waxan filaayaa in aan horay wax idin soo weydiiyay aadna iiga jawaabteen marka dockta kale ayaan utagay waxowna soo saaray meeshii dhibka owka jiray sambabada ayaa lagu arkay wax cad cad oo uraa kabacdi daawo ayow iiqoray waane dhameey daawadii waane sidii ilaa iyo hada dr kii ayaan ku noqday marka waanku qalaa ayow dhahay marka maxaan kasameeyaa maqalaa mise waa arinta af qur moonka
Caadilow, qalliinka ha ku degdegin ayaan tallo ahaan ku siin lahaa, waayo inta badan qalliinku waxa uu leeyahay risk, khatartiisa. waxaa aan ku soo jeedin lahaa bal in aad dhakhtaro kale u tagto oo aad bal iyagana aad iska soo baadho. Ilaahay hakuu fududeeyo aamiin.
© Copyright 2012 | mareegta caafimaadka
M.deq - januari 18, 2012
Asc walaala yaal ad ayad u mahad santahin su asheydna waxey tahay halkee leska baraa markey tahay in leska baro xoqadaha ma dandiska mase cisbitalada cadiga ah inteesa la dhahaa xoqataha idinkoo rali iga ah sifiican iigu micneya tas
admin - januari 20, 2012
Waad salaaman tahay. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay suáashaa aad na soo waydiisay. Xoqadaha??
Aad iyo aad ayaad u mahandsan tahay Suáashaa aad na soo waydiiday. Jawaabtiina waatan. Afka qalaad waxa lagu yidhaahdaa Tonsil, xoqadaha. Jaristeedana waa qaliin yar oo aad u fudud,saacado badana aan qaadanayn. Waxaanad u tagaysaa dhakhtarka caadiga.
yaasmiin - januari 22, 2012
asc siqaas ah waxaan u salaamaa dr,ka su,sheyda waxaay tahay afqurmida oo aan dareemaayo mudo 5sanno ah saxaa keeni karo mida kale gooskeeyga ad ayuu u duleelaa makeeni karaa ur tankale anigoon isbaarin miyaan dawada sb12 iska isticmaalaa haleysoo bayaaniyo mida kale urka makeenikaraa caloosha oo fadhisa waayo dadbadan oo waxaa jirro calosha u bixinteeda ama socodsiinteeda i isticmaallo waxyaallo bada sida raqayda iyo biyaha sida kaniiyada marka fadhigas calosha makenikarta ur misse gooskeygo duleello waa keeni karaa dr, iiga sooo jawaab mombasa kenya ayaan joogaa
dr. waxaa kaloo jirro aniga gaas ama alsa ayaan qabaa oo aan dareemayo mudo 5sanno kabadan, ilaa iyo waxa uu kufiday dhuunta xitaa marka uu gaska iigu kaco waxaan dareemaa dhuun xanuun urta makeenikaraa mida kale aan rabo waxaay tahay dawada dhabta ee gaaska looga hortagi karro in aan hellno maad mahadsantihiin illah haidin fududeeyo barnamijkaan aad wadaan
admin - januari 28, 2012
Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay su´aalahaa aad na soo waydiisay. dahwr su´aalood ayey ahaayeen ee bal aynu kala dhigdhigno. urta ka soo baxaysa afka, Inta badan urta ka soobaxda afka,
waxa ay inta badan ka timaadaa, afka gudihiisa, waxaana keena urta, ilkha oo aan si fiican loo cadayin, carabka oo iskaga (huurada) laga nadiifin, cirifka oo daloola, kadibna ay ku samaysmaan dhagaxaan.
marka hore waxaan ku odhan lahaa u tag dhakhtarka ilkha ee Mombasa, si fiican isku baadh. ayaan talo ahaan kuu soo jeedinayaa. Iligan ku daloolana ur uu keeni karaa, haddii ciridku daloolo oo meeshu noqodto kiis ay bakteeriyadu gasho. Iliga qudhiisa waa in wax laga qabto inta aanu kugu keenin infection. Dawadan B12 , waa mid urta biisa. Waad isticmaali kartaa adigoon u tagin dhakhtar, hase yeeshee waxaa ka wanaagsan in dhakhtarka ilkuhu si fiican kuu waa baadho, oo la ogaado meesha ay urtu ka imanayso. Su áashii kale ee caloosha oo fadhida ur ma keeni kartaa? jawaab gaaban, Caloosha oo fadhidaa ur ma keento.
Arrinta kale ee su´aalahk ku jirtay oo ah gaas baad leedahay. Guudmar
Bal inyar oo kooban aynu ka yara faaloono, waxyaalaha keena gaasta iyo sida loo daaweeyo amaba looga hortaggi karo.
Gaasta waxaa loo qaybiyaa laba nooc. Waxaan isku dayi doonaa haddii Ebbe idmo in yar oo fudud aan u sharaxo qodobka gaasta si loo fahmo.
1- Gasta waxa ay ka kooban tahay laba nooc midi waa
Hawada aynu liqayno/cabayno. marka kasta oo uu qofka neefsanayo, waakan marna hawo afkiisa sii galayso marna ka soo baxayso. 2- Gaasta labaadna waa ta bakteeriyadu ku samayso mindhicirka weyn.
Waxaad maqlaysaa dadka oo yidhaahda gaas baan leeyahay, oo calooshii baa i buurnaatay. In calooshu soo buurnaato oo gaas gasho caloosha waa wax ay dad aad u badani runti ka cabanayaan.
Marka ay gaastu caloosha kujirto, qofku waxa uu dareemaa in calooshu soo buurnaatay, waxaa kaloo caloosha ka soo baxa cod, (qudhudhudhudhudhdudh) , waxa kale oo ayg aastu keentaa xanuun. Ma jiraan runtii daawo gaastan ka hortaggi karta ama ka saari karta gaastan ku jirta mindhicirka weyn hase yeeshee waxaa jirta daawo qofka ka caawinaysa in xanuunka ka yarayso.
Marka uu qofku stress ku jiro waxa uu qofku liqaa ama dajiyaaa hawo badan, taasina waxa ay keentaa in calooshii ay gaas gasho, waxaa kaloo keena gaats, Cabitaanka sigaarka
Xanjo oo la calaashado
Nacnac adag oo uu qofku mudmuudsado
qofka oo cuntada si degdega u cuna
Cabitaanka ay ku jiro carbon-tu
Waxan oo dhani waxa ay keenaan in gaas badan gasho ama ku dhcao kiishka caloosh, kadibna ay keento calool buurnid iyo xanuun.
Waxaa la yidhaahdaa in saacadii uu qofku liqo 70 goor oo hawo ah wakhtiga uu soo jeedo.
Khatar maaha gaastu.
Waxaa kaloo iyana jirta oo qayb weyn ka qaadata in gaas ku dhex samaysanto caloosha. Cuntooyinka aynu cuno ayaa iyagu keena gaasta. Cuntooyinkaas waxaa ka mida ee gaasta keenta. Waxa dhcad in bakteeriyada ku jirta mindhicirka weyn ay khamiiriso cuntadii aan sida fiican u dheefshiidsanayn ama aan xubnihiikale ee jidhku soo yaryarn (ridqin). Khamiirintaa ay halkaa ku khamiirinayso bakteeriyadu ayaa waxa ay keentaa in mindhicirkaa weyn gudihiisa gaas ka samayso. Qayb ka mid gaastaas waxaa qaadta dhiigga jidhka, waxaanu sii raacaa ama sii maraa sambabada.
3- Digirta iyo faasuuliyaha
4- Kaabajka (kaabash)
Waxa kaloo jira in dumarku marka ay uurka leeyihiin ay caloosa gaas gasho
Sidoo kale haddii uu qofku dhibsanayo caanaha iyo (Lactose-and gluten intolerance). Dad baan caanaha cabikarin ama cunkarin waxyaalah laga sameeyo roodhida, waayo waxa ay ku keenaysaa calool xanuun.
Yaasmiineey, adigaa dawada isku haya, waxa aad samaysaa bal maalin tihjaabi , cuntada aad cunayso, oo qor, ka dibna waxa aad eegtaa in caloosha gaas kaaga samayso, ka dib markaad cuntada cunto.
daraasaad ku samee cuntada aad cunayso nooca ay gaastu kaaga kacayso. Haddii markaa daraasaadaa cuntada aad cunayso ku samayso, waxaad ogaan ka kartaa cunta aad ku xanusanayso nooca ay yihiin. Xalkuna markaa waxa weeyo in aad iska yarayso ama iskaba dayso cuntadaas aad gaast ka qaadayso. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa suáalihii aad na soo waydiisay, waxaanan filayaa in aad ku qanacday. dadka soomaalida aad iyo aad ayey uga cawdaan gaastaa caloosha ku samaysmaysa. Waxaan wanaagsan in uu qodku dhakhtar u tago oo uu isa soo baadho. Waxaa kaloo wanaagsan in uu qofku iska daayo haddii waxyaalahaa aynu kor ku soo xusnay isku arko
nasro - februari 10, 2012
Wad mahadsantihiin walalayaal
Asc walalayaal aniga waxan qabaa cudurka afqarmuuunka. Hada wuuxuu ihayaa mudu halsano ah afkayga ad ayuu u raayaa ila ay. Dadka. Šanka. Iga qabsadan waxa sababana wan garanwayay dhowr. Marna. waxa aday. Dhaqtar gaasle layga baray wana laga wayay Mar marka qaarna sank layga qabsadaafkayga wax kukusan oo cad cad ayaa dhuuntayda kasoo daadanaya caloshaydana markasta way dhawaaqdaa ilaa sanad ayaan qabaa dhibkaas marka walalayaal ii sheega wax aan sameeyo
idinkoo raaliya dawada ah sb12 sax miyaa magacas mise waa b12 kaliya mahadsanidiin
admin - februari 21, 2012
Asalaamu Calaykum Nasro!
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay su´aashaa aad na soo waydiisay. Runtii dhibaatadan riixda afka qadhmuun, mid adiga oo kaliya ku saamaysay maaha,
hase yeeshee waxaa jira dad aad u tiro badan oo ay dhibaatadani haysato. Suáasha dhawr goor oo hore ayaa aad na loo soo waydiiyey. Waxaanad u baahan tahay bal in aad baadho ciladu xaga
ay ka imanayso, wixii caloosha ka imanaya waxaa ku shaqo leh dhakhtarka caadiga si loo baadho waxaa cad cad ee caloosha ka imanaya waxa uu yahay. Wixii kale ee ilkaha ku saabsan waxaa ku shaqo
leh dhakhtarka ilkaha. Dawadu waa SB12. Waxaa kale oo riixda afka qadhmuun yarayn kara kamsarada. Nasro waxa aan halkan kuugu soo lifaaqayaa, su´aashan oo meelo badan lanaga soo waydiisyey, dad
badanina ay aad noo soo waydiiyeen jawaabtii aanu ka bixinay ee naga guddoon waan tan jawaabtii.
”Cilmi-baadhid Ku Saabsan Riixada Qadhmuun Ee Afka Dadka Ka Soo Baxada *Af Qadhmuun-ka” aad ka aragtay waxaa jira cuduro qofka ku dhaca oo keeni kara urta/qadhmuunka afka. Waxaad aad isticmaali kartaa dawada ilkaha lagu cadaydo, carabakana aad u safee oo si fiican u caday. waan dareemayaa in ay dhibaato kugu hayso urtu, balse ha niyad jabin. Halkani hoose ka akhrsio jawaabtii aanu siinay akhristayaashii suáashaadaas oo kale na soo waydiiyey.
Waxaan filayaa inaad ku qanacday Nasrooy suáashii aad na soo waydiisay jawaabteedii.
nasro - mars 8, 2012
Walal aad ayaad u mahadsantahay jwbtada wafiga aniga dhibkayga waxan u. Malenaya in ay. Urto ka imanayso xaga calosha wayo neeftayda ayaa. Uresa waxana daarema in ay calosha tahay marka mida calosha. Ah maxaa. Lagu dawen kara ? Sankeyga xita nefta ka imaneso waa. Qarmuun marka dhibkaasna wuxu I haya mudo halsano ah markasta waxan dhaqtarkeygana siwalba walay baray wadankan aan jogana luqadisa dhib ayay igu tahay marka talo hala isiiyo dawada sb12. Wan kawayay waxan arkay b12 oo fatamina taas miyaa walal
admin - mars 8, 2012
Dawada magaceeda waxaa la yidhaahdaa sidaa maqaalka aan kuu soo diray ku qoran SB12, B12 waa fitamiinka, taa maaha ee waa SB12 ta urta yaraysa. Inta badan waxaa lag helaa farmasiiyada
wadamada Yurub, America iyo Asia. Waa suurta gal in Africa laga helo. Maad soo sheegin wadanka aad joogtid. hase yeeshee waxa aad waydiin kartaa shaqaalha ka shaqeeya farmasiga kuu dhaw dalka aad degen tahay.
feysal - maj 3, 2012
asc wwaad salaamantihiin dhamaan bahda caafimaadka waadne ku mahadsantihiin war bixinada hadii aan u kuur galo waxaa in mudo ah i haayo cudurka aad halkaan kusoo qorteen ee af urka isago ugu danbeyn isku bedeley in gabi ahaanba neefta ee iga urto dhaqaatiirta inbadan waan kala xeriiray arinkaan inkasto aan weli xal aan u helinmar walbo aan dhaqtarka gaarka ah aan u tago normal weeye buu igu yidhaahda waayo iyaga waxa ee moodaan wax iska caadi oo afka kaliyah ku koobaan marka hadii aad macluumaad aan ku xalin karaayo hadaad ii heysaan bal ila soo xedhiidha
markale ayaan kusoo laabtay marki aan commentiga idin reebey ma aanu aqrin lkn hada ayaan si wacan u aqriyay dhibta hada i heysato af qurun kaliyah ma ahan ee neefta dhan waaye lkn xeliga oo igu bilaabanaaye afka ayuu ka bilowday weliba si tartiib ah kadibne wuu igu faafayne gabi ahaan neefta ayaa riixa iga ah daawoyinka afka lagu dhaqo waaan isticmaalay dhaqtaka ilkaha waan booqday gabi ahaan waad caafimaad qabtaaa ayuu igu dhahay dhanka ilkaha marka neefta gudaha waaye i think so